INDLU YAMAKHADI EXESHA LESI-7 UMHLA WOKUKHUTSHWA, ISIQENDU, ISIQENDU, ITRAILER KWAYE NGABA SINOKUBONA UBUSO OBUTSHA KWIISIZINI EZIZAYO? - IINKQUBO ZETV
Indlu yeeCards, umdlalo wezopolitiko waseMelika osekwe kwinoveli ebhalwe nguMichael Dobbs ngo-1989, yayiyinxalenye leyo
Indlu yamakhadi , Idrama yezopolitiko yaseMelika esekwe kwinoveli ebhalwe nguMichael Dobbs ngo-1989, yayiyinxalenye yengxoxo kwihlabathi liphela. Ifumene uthando ngakumbi kwihlabathi lonke kunokugxekwa. Umboniso unamaxesha amathandathu ewonke ukuza kuthi ga ngoku. Nangona kunjalo, iindaba zonyaka wesixhenxe zisemoyeni, kodwa zoyikeka.
Nazi iinkcukacha ofuna ukuzifumana malunga nomboniso.
Kutheni le nto iNdlu yeeKhadi ingavuselelwa ixesha lesixhenxe?
Ewe, abenzi bayenzile ukuba ibe semthethweni Indlu yeeKhadi ayizukufumana ixesha lesixhenxe . Sisiqwenga seendaba ezingathandekiyo kubo bonke abalandeli phaya abebelinde ngolangazelelo ukuva iindaba ezimnandi kulo bhubhane wehlabathi.
Ukujonga isizathu sokuba umboniso ungafumani luhlaziyo kubonakala kakuhle. Iindaba zika-Anthony Rapp osolwa ngokubiza umlingisi ophambili uKevin Spacey wohlaselo ngokwesondo ayonto intsha. Kuyothusa kakhulu kuba uRapp wayeneminyaka eli-14 ubudala xa wayehlaselwa ngokwesondo. Ngenxa yokubaezi zityholo, ophambili kumdlalo uKevin Spacey, kwafuneka aphume kulo mboniso. Kungenxa yesi sizathu ukuba ukuhlaziywa komboniso akunakulindeleka ukuba umdlali weqonga uKevin Spacey angabi yinxalenye yabadlali.
Ngaba iNetflix isusa iNdlu yeeKhadi ngokupheleleyo?
Njengoko sisazi, iNetflix ayibandakanyi ngexesha elifanelekileyo kwiimovie ezithile kunye nemiboniso.
Okwangoku, amarhe kukuba iNetflix iyacwangcisa ukususa iNdlu yeeKhadi ukusuka eqongeni kunikwe impikiswano umboniso uye wakhulisa. Kungokwemvelo ukuba isigebenga sokusasaza sifune ukugcina igama laso.
Sibone njani ukuba iNdlu yeeKhadi yeXesha lesi-6 iphela?
Njengoko uKevin Spacey wagxothwa kumdlalo emva kwezityholo zokuhlaselwa ngokwesondo, ababhali kuye kwafuneka batshintshe iyelenqe ngokungathandabuzekiyo. Ke, kwisizini yesithandathu, sibona uRobin Wright edlala indawo kaClaire Underwood ukuba abe ngumongameli omtsha wase-USA. UClaire, kwisizini ephelileyo, wabonakala etshabalalisa umfanekiso kaFranks ukukhusela ubongameli bakhe.
Umboniso uphela ngoClaire Underwood ehlabe uDoug Stamper ngemela kwaye wambulala kwangoko.
Esi siphelo singaqinisekanga sishiye ababukeli benemibuzo emininzi engqondweni yabo. Nangona amathuba exesha lesixhenxe eyenzekayo engabonakali enokwenzeka, sinokulindela ukuba ibali lilandele ukukhokela kukaClaire ukuba kuyenzeka.
Amaphupha amabi ekhitshini oceana hulu
Ixesha lokutola 10 hulu
Ngaba likhona ixesha lonyaka lesi-5 lehaikyuu
idrama yamatshayina idrama 2020
uthando kumabala esizini 2